I-Ultrasonic Disintegrators - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukuqhekeka kwamangqamuzana kuwumsebenzi ojwayelekile ku-biotechnology nasezintweni eziningi ezibandakanya ukucubungula amaseli nezinto ezibonakalayo ze-intracellular. Ama-distrigrators weseli ye-Ultrasonic ayasebenza futhi athembekile, uma kukhulunywa ngokuphula udonga lweseli noma ulwelwesi lwamaseli ezitshalo, izicubu zezilwane ezincelisayo, isikhunta, isikhunta, imvubelo nokunye. I-Hielscher ikunikeza ngeziqhumane ezisebenza ngokuphezulu ze-ultrasonic kusuka kumadivayisi kasayizi we-lab compact ukuya ebhentshini-phezulu kanye crushers yezinga lezimboni.
I-Ultrasonic Cell Disintegration
Ukumiswa kweseli okubandakanya amaseli wezitshalo, i-mammelian noma ama-microbial cell kudinga inqubo ephumelelayo futhi ethembekile, ephazamisa izindonga zeseli noma ulwelwesi futhi yenze izinto ezibonakalayo ezitholakalayo ngezinqubo ezilandelayo noma zokuhlaziywa. Ama-Ultrasonic cell disintegrators angama-disintegrators angumakhenikha, aqhuma ngempumelelo amaseli (isib. Imifino, amaqabunga, iziqu), izicubu (isib. Amaseli we-mamalia, izicubu, isibindi, inhliziyo) kanye nama-microorganisms (isib. Ama-bacteria, isikhunta, ama-actinomycetes, ama-micro- kanye nama-macro-algae, ama-yeast ). Ukuqhekeka kwe-Ultrasonic kuyindlela yokuphazamiseka kwamangqamuzana emishini, elenza ukuthi i-sonication isebenze kahle futhi ithembeke uma kuziwa ekuhlolweni kwamaseli. Ngakho-ke ama-dissocigrators e-ultrasonic cell ahlala futhi abizwa ngokuthi ama-crushers e-ultrasonic cell, ama-cell grinders, ama-cell draverizer noma imishini yokufaka amaseli.
Isebenza kanjani iMishini Disintegrator
Ama-Ultrasonic lab disintegrators asebenzisa inqubo efanayo yemishini njengoba abahlukanisi bezimboni benza. Amasistimu wokuxuba ama-disintegrator ahlukanisa amaseli, ahlanganise into eqinile noma ahlakaze izinhlayiya eziqinile kumasikhethi e-liquid. Ukuhlukaniswa kwe-Ultrasonic kufaka iprojekhthi ephezulu ye-ultrasonic ethangini le-batch noma ku-line-flow flow cell reaction. I-ultrasonic disintegrator probe iyavevezela ku-ketshezi esikhungweni esiphakeme kakhulu futhi idale ukuqina kwe-ultrasonic okuqinile kuketshezi. Ukuwa kwe-bubble ngayinye ye-cavitation kuholela emandleni e-shear anamandla, lawo maseli aqhuma, imicu, ama-agglomerates ngisho nezinhlayiya eziqinile. Futhi, i-ultrasonic cavitation ikhiqiza ukusakaza okuphezulu kwejubane okufika ku-1000km / h. Ama-jet we-cavitational liquid jet impinge agglomerates, izindonga zeseli eliqhekekile, athuthukisa ukuthunyelwa kwezinto ezibonakalayo ngaphakathi kwe-slurry kanye nokusabalalisa okugcwele kulo lonke ivolumu. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-4 mixer blade sizodinga ukusebenza ku-300,000 RPM ukufezekisa imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile be-rotary nabahlanganisi be-rotor-stator abakhi mali enkulu ye-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane.
UP400St – Iprosesa enamandla ye-400W enamandla e-cell disintegration nge-agitator
Ama-Ultrasonic disintegrators adume kakhulu ngokuthi ama-disintegrators weseli noma abaphazamisi beseli. I-Ultrasonic cavitation kuyindlela ephumelelayo yokuqhekeza isitshalo noma izicubu zibe izicucu ezincane. I-Ultrasonic cavitation iyindlela ephumelelayo yokwenza i-fibrillation yemicu noma ukukhishwa kwe-botanical extracts. Izindonga zeseli ze-Sonication zezinto ezintsha noma ezomisiwe zamaselula zingakhethwa kakhulu futhi ukukhethwa kwe-solvent kuyisici esifanele sokuhlukana. Ama-distrigrators e-Ultrasonic ahambelana cishe nanoma iyiphi i-solvent. Umfutho oshintshashintsha uketshezi ugcizelela uketshezi ngokusebenzisa ulwelwesi lweseli ngesikhathi somjikelezo we-high-pressure, futhi ukhipha uketshezi esitokisini ngesikhathi somjikelezo ophansi (we-vacuum). Lokhu kwenzeka isikhathi esingaphezu kwama-20,000 ngomzuzwana. Ukucindezelwa okuphindaphindwe kwe-ultrasonic cavitation kwenza buthakathaka ukwakheka kwamaseli futhi ekugcineni kuqhume amaseli abe yizicucu ezincane, okuholela ekuqhekekeni kweseli okusheshayo nangokuphumelelayo. Ukusebenza kwayo kwenza i-sonication ibe ubuchwepheshe bokuqina bokuqina.
Amadivaysi ohlobo lweProbe uhlobo lwamathuluzi alusizo kakhulu kulo lonke ilebhu. I-probe ye-ultrasonic i-geometry elula nenduku ye-Titanium elula nehlanzeka kalula ukuthi imibhangqwana ye-ultrasonic inyakazise ibe uketshezi. I-Hielscher yenza ama-probes we-ultrasonic namathiphu ngobukhulu obuningi. Ekuhlukaniseni okuvame kakhulu kwama-solids kulebhu, ama-proses of ultrasonic we-3, 7, 14, noma i-22mm tip di awusizo kakhulu. Olunye usayizi wokuhlola kanye nosayizi we-ultrasonic osayizi abakhona bayatholakala. Amadivayisi ajwayelekile we-ultrasonic we-laboratory disintegration uhla kusuka kumandla we-100 kuya kwangama-400 watts.
UP100H nge-son14 ye-sonotrode yokuphazamiseka kweseli kwezinto zezitshalo
I-Hielscher disintegrators yezimboni zingamadivayisi aphezulu we-ultrasonic enzelwe ukuhlakazeka okuqhubekayo. Izimboni ze-ultrasonic ze-Industrial ziza ne-flange engafakwa emathangini ensimbi, emikhunjini yengilazi noma ezitsheni zepulasitiki kunoma yikuphi ukuma. Imishini ejwayelekile yokwehlukaniswa kwezimboni ye-ultrasonic isukela ku-1000 kuya ku-16,000 Watts wamandla we-ultrasonic probe ngasinye.
Izimboni ezivamile ze-Ultrasonic Cell Disintegration
I-Biology / Microbiology
Ukusebenza kokudla (isb., Isizinda se-flavour, isizinda sokudla okunezakhi zomzimba, ukuguqulwa kokuthungwa)
Ukusaphaza imfucuza (i-sludge)
Ngamadivayisi we-Hielscher, ungabheka futhi ulungise inqubo yakho ye-ultrasonic nge-browser elawulwa kude
Chofoza lapha ukuthola imigomo yokuhlakazeka kwe-ultrasonic yamaseli ahlukahlukene nezicubu!
Ungayithenga kanjani i-High-Performance Ultrasonic Cell Disintegrators
I-Hielscher Ultrasonics ingumenzi wesipiliyoni wesikhathi eside we-high-performance ultrasonic cell disintegrators. Njengomholi wemakethe, ama-Hielscher design, enza futhi asabalalise ama-homogenizer e-ultrasonic kusuka elebhu nasebhentshini phezulu afike esikalini esigcwele sezimboni.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors ahambisa kalula ama-amplopes aphezulu kakhulu, adingekayo ukuphula izindonga zeseli eziqinile. Abaphikisi bezimboni ze-Hielscher bangaqhutshwa ngama-amplopes afinyelela ku-200µm ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Izesekeli ezengeziwe ezinjengezimpondo ze-booster, ama-flow cell, ama-sonication reactors kanye nokusetha kabusha kokuphinda kutholakale zitholakala kalula futhi zivumela ukumisa uhlelo lwakho lwe-ultrasonic olucaciselwe izidingo zakho zenqubo.
Ama-Intelligent Cell Disintegrators
I-Hielscher Ultrasonics igxila ekuhlukaniseni amaseli okusebenza okuphezulu ngobungani obukhulu kakhulu bomsebenzisi kanye nenqubekela phambili yezobuchwepheshe yezwe. Lokhu kusho ukuthi amazinga we-Hielscher lab disintegrators avumelana kakhulu nokuqonda kwemishini yezimboni. Umsebenzisi angalawula ama-digital ultrasonicators we-Hielscher ngokusebenzisa isilawuli kude esipheqululini. Isoftware yokuqoshwa kwedatha ezenzakalelayo ibhala yonke imingcele ebalulekile ye-ultrasonic efana namandla net, amandla aphelele, amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, isikhathi nosuku njengefayela le-CSV ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, i-disintegrator ye-ultrasonic ingahlelelwa i-othomathikhi ukuvala emva kwesikhathi esinqunyelwe noma okufakwayo kwamandla noma izindlela zokudonsela phansi ze-sonication. Izinga lokushisa elinokubhoboka kanye nezinzwa zokucindezela zivumela ukulandelela ngokucophelela izimo zesampula. Njengoba ukulawulwa kwezinga lokushisa kwamasampula webhayoloji kuvame ukuba yinto ebalulekile yekhwalithi yemiphumela yenqubo, uHielscher unikeza izixazululo ezahlukahlukene zokugcina izinga lokushisa inqubo ebangeni eliqondisiwe lokushisa.
Ungathenga ama-Hielscher ama-disintegrators e-Hielscher kuwo wonke amasayizi ahlukene. Ukusuka ekuqhekekeni kweseli ezimpondweni ezincane ze-cryo-vials zokucwaninga kwezokwelapha kuya ekuhlukaniseni kokugeleza okuqhubekayo kwe-slurries, i-Hielscher Ultrasonics inosayizi ofanelekile we-disintegrator wakho! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma i-ultrasonicator efanele kunazo zonke!